Buddhavani | Mahavani | केपी ओलीको दोश्रो पटक मिग्रौला प्रत्यारोपन र कोराेना भाइरस | |Main News|विचार
केपी ओलीको दोश्रो पटक मिग्रौला प्रत्यारोपन र कोराेना भाइरस
Published on 2020-03-06 Main News
यो साता नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोश्रो पटक मिग्रौला प्रत्यारोपन र कोराेना भाइरसको चर्चाले ब्यापक स्थान बनाएको छ ।अहिले कोरोनाको त्रासले नेपाली जनता त्रसित छन् । आज सरकारी निकाय, समाजिक संजाल, संचारक्षेत्र यसै कोरोनाको चर्चा परिचर्चाले भरिएको छ । तर दुखद कुरा के हो भने यस भाइरसबाट मुक्त हुने कुरा भन्दा पनि यसको त्रास दिने कार्यमा बढी लागेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले अहिले जुन किसिमले त्रास फैलाउने काम गरिरहेको छ यसले कतै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे चासो नराखोस भन्ने षडयन्त्र हुन सक्छ । एमसीसीलाई पास गर्ने षडयन्त्र हुन सक्छ । अहिले चर्चामा रहेको बास्टोलाको मुद्धालाई कमजोर बनाउन हुन सक्छ । गणातन्त्रकाे असफलतालाइ लुकाउन वा देशमा अराजकता मच्चाएर निरकुंश कम्युनिष्ट शासन लाड्ने षडयन्त्र हुन सक्छ तसर्थ यस तर्फ नेपाली जनताले ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारको काम जनतामा त्रास फैलाउने नभएर जनतालाई आश्वस्त पार्ने हो कोरोनाको विरुद्ध आवश्यक तयारी गर्ने हो । त्यसमा पनि किनकी कोरोना भाइरस ३० डिग्री भन्दा कम तापक्रममा मात्र बाँच्न सक्ने, कमजोर भएका र बुढा बुढीहरुमा बढी लाग्न सक्ने, स्वस्थ ब्यक्तिमा कम मात्र लाग्ने भनेर भनेता पनि यो भाइरसलाई यति भयानक बनाइ दियो कि अब मानौं प्रलय नै आउन लागेको हो । तसर्थ बुद्धले भन्नु भएको छ । कुनै पनि कुरालाई बहुमतले भन्यो भन्दैमा त्यसलाई विश्वास नगर पहिला त्यसबारे गहिएर विचार गर अनि मात्र विश्वास गर त्यसलाई अनुशरण गर भनेर आज्ञा भए झैं अहिले हामीले पनि कोरोनालाई भूतप्रत झैं मान्नु आवश्यक छैन । तर सर्तक हुनु आवश्यक छ । किनकी कोरोना मात्र औषधी नभएको होइन अहिले सम्म बल्ड फ्लोको , एड्सको, क्यान्सर लगायत धेरै रोगहरुको औषधी तयार भएको छैन । त्यसैले भयभित भएर बाँच्नु भन्दा पनि संयमित भएर बाँच्नु आवश्यक छ । अझ नेपालमा मानवियतालाई बिर्सेर अमानवीय कार्य गर्न पछि नपर्ने र पैसाकोलागी जे पनि गर्ने समूहहरुको पनि बाहुल्यता रहेकोले यस्तो हल्ला फिजाएर आम्दानीको श्रोतहरु बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा बुद्धवार ६ वटा फर्महरुलाई कारवाही गरेको घटनाले पनि स्पष्ट गर्दछ । त्यसैले चिन्ता होइन चिन्तन गर्नु र लापरवाही होइन संयमिता र होसियारी र सर्तकता अपनाए कोरोना मात्र सबै भाइरस र रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
त्यसैगरि सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र चर्को विवादको बिचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोश्रो पटक मिग्रौला प्रत्यारोपन टिचिंग अस्पतालमा उपचार सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शिघ्र शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना बुद्धवाणी परिवार गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोश्रो पटक मिग्रौला प्रत्यारोपनसंगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अब विश्वस्तरको भएको चर्चा परिचर्चा पनि हुन थालेको छ । जुन नेपाली जनताकोलागी अत्यन्तै खुशीको कुरा हो । अत्यन्तै महँगो रोगको रुपमा रहेको मिग्रौला प्रत्यारोपन नेपालमा नै स्तरीय रुपमा सम्पन्न हुनसक्नु नेपालकोलागी गौरबको विषय हो । हुनत टिचिंग अस्पतालको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिले सम्म ८०० जनाको मिग्रौला प्रत्यारोपन गरिसकेको छ भने यसको सफलता ९२ प्रतिशत रहेको छ । जुन अत्यन्तै स्तरीय सकारात्मक कुरा हो ।
रुघाखोकी लागेमा पनि विदेशमा जाने हाम्रा नेताहरुको बानी रहेकोमा समयमा प्रधानमन्त्री ओली दोश्रो पटकको मिग्रौला प्रत्यारोपन नेपालमा नै गराएर नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यक्षेत्रलाई विश्वसनीय रहेको प्रमाणीत गरिदिएको छ । जुन प्रधानमन्त्रीको सह्रानीय कार्यहो ।
तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाली डाक्टरहरुप्रति गरिएको विश्वासलाई देशभक्तिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । जसलाई भने स्वास्थ्यलाई पनि राजनीतिक फाईदाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य भएको बुझिन्छ । किनकी यदी नेकपा भित्र विवाद सृजना नभएको प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा होइन अमेरीका मिग्रौला प्रत्यारोपनकोलागी जाने तयारीमा रहेको र यसकोलागी डा. दिब्या सिंह अमेरीकामा गएर सबै ब्यवस्था मिलाएर आएको समाचार पनि आएको नै छ । तसर्थ अहिले ओलीको नेपालमा मिग्रौला प्रत्यारोपन रहर र विश्वास भएर होइन बाध्यतामा भएको भनेर बुझिन्छ । तर उनको बाध्यतालाई नेपाली चिकित्सकहरुले हामी नेपाली पनि विश्वस्तरीय सेवा दिन सक्छौं भन्ने प्रमाणीत गरिदिएको छ ।
नेपालको शासकहरुको पहिलो दायित्व नै आफ्नै देश र यहाँका जनतालाई विश्वास गर्ने हो । जसको उदाहरण भनेको राजाहरुले सदैब देखाउँदै आएका छन् । राजपरिवारलाई कुनै पनि रोग लागेमा विदेशमा होइन नेपालमा गर्ने गरेको इतिहास रहेको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि जस्तोसुकै रोग भए पनि नेपालमा नै उपचार गरेर निको भएको घटना पनि ताजै रहेको छ ।
तसर्थ अहिले ओलीको सफल मिग्रौला प्रत्यारोपनले पुन एकपटक राजपरिवारले विश्वास गरेको तर नेताहरुले अविश्वास गरेको चिकित्साह क्षेत्र वास्तवमा नै विश्वस्तरीय भएको प्रमाणित गरिदिएको छ । भनिन्छ नी हिराको मुल्य हेराको व्यापारीले मात्र थाहा हुन्छ भने झैं आज यही उखान चरित्रार्थ भएको छ ।
नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापना हुँदैछ
Published on 2020-02-29 Main News
यो हप्ता देशको राजनीतिमा संविधान संशोधनको विषयले ब्यापक चर्चा परिचर्चा पायो । जनताबाट दुइतिहाई मत पाएको नेकपाका प्रचण्ड बामदेब गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्टियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री सक्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न चाहे भने प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्टपतिलाई सेरोमोनियमबाट संम्बैधानिक राष्टपति हुने गरि संविधान संशोधन गर्न चाहे ।
नेपाली जनता समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना सहित नेकपालाई जनताले दिएको अभिमतलाई आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकोलागी उपयोग गरिरहेको देख्दा नेपाली जनता निराश र आक्रोशित भएका छन् । आज देशको संविधानलाई देश र जनताको हितकोलागी उपयोग गर्नु पर्नेमा नेताहरुको सत्तास्वार्थकोलागी उपयोग गरिरहे । संविधान संशोधन गर्नु नै हुँदैन भन्ने होइन संविधानलाई देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नु पर्दछ तर अहिले एक व्यक्तिको स्वार्थकोलागी संविधान नै संसोधन गर्न कार्यदल समेत गठन गर्ने कार्यले यी गणतन्त्रवादी नेताहरु वास्तवमा नै नेपाल र नेपालीहरुकोलागी शासन आएका होइन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।
हुनत ०६२ को कथित जनआन्दोलन नै विदेशीहरुको निर्देशनमा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर देशलाई बर्बाद गर्न गरिएको हो भनेर फैलिएको कुरा आज यर्थात रुपमा परिणत भएको छ । त्यसैले आज बालुवातार काण्ड, वाइदी काण्ड, होली वाइन काण्ड,नेपाल टष्ट काण्ड, गोकुल बास्टोला काण्ड आदी काण्डैले देखाएको छ । भने भारतबाट नेपालको भूभागलाई कब्जा गर्दा पनि मौनख हुनु, एसीसी जस्ता देशघाती सम्झौताहरु देशमा ल्याउनुले पनि नेपालमा राजतन्त्रलाई किन हटायो र किन गणतन्त्र स्थापना गरियो भनेर ऐना झैं स्पष्ट भएको छ ।
यसरी देशलाई लुट्ने र परतन्त्र बनाएर मात्र होइन गरिब मजदुरहरुलाई समेत जर्वजस्ति कर तिर्न लगाउनु मात्र होइन अब किताबमा कर, पेटोलमा विकास कर भनेर नेपाली जनतालाई लुटिरहेका छन् । कर उठाउनु पर्छ देशको ढुकुटी करले नै भर्र्ने हो । करले नै देशको आर्थिक ब्यवस्था संचालन हुुने हो । तर कर के मा लगाउने भन्ने मूल प्रश्न हो भने अहिले जुन किसिमले हरेक तह र तप्कामा नेपाली जनताको ढाड नै सेक्ने गरि कर लिइरहेका छन् ती करको रकम कहाँ गयो र के का लागी उपयोग गरे ? आज प्रश्न यो रहेको छ ।
देशको विकास र समृद्धिकोलागी कर उठाइरहेको हो भने नेपाली जनता दिनपरदिन एकछाक खान धौ धौको स्थितिमा रहेका छन् । रोजगारी पुर्णरुपले अस्तब्यस्त भएको छ । वेराजगारीको समस्या दिनदुगुणी रातचौगनी बढीरहेको छ । विकास हेर्ने हो भने एउटा सकड सम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । महंगी, कालोबजारी र भ्रष्टचार, असुरक्षाले देशलाई खाइरहेकोछ ।
आज नयाँ नेपाल भनेर भनिएको गणतन्त्रको शासनमा नेपाल राणाकालीन अवस्थामा पुगीरहेको छ । सरकार र उनका कार्यकर्ता मात्र सुखी र समृद्ध बन्दै छ भने नेपाल र नेपाली जनता गरिब र बर्बाद हुँदै छ । त्यसैले अब संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ तर त्यो व्यक्तिकोलागी होइन देश र जनताकोलागी संशोधन गर्नु पर्दछ । देश र जनताको अहिलेको आवश्यकता र चाहना भनेको राजतन्त्रको पुनस्थापना हो त्यसैले अब विगतमा संम्बैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था हुने गरि संविधानलाई तत्काल संशोधन गर्नु पर्दछ ।किनकी अब गणतन्त्रले् देशलाई बचाउन सकिन्न र राजतन्त्रले मात्र सकिन्छ ।
तसर्थ व्यक्तिगत स्वार्थकोलागी संविधान संशोधन गर्न तयार हुने यी सत्तापिपासुहरुलाई अब नेपाली जनताले संम्बैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था कायम हुने गरि संविधान संशोधनकोलागी दवाव दिनु पर्दछ । यसकोलागी नेपाली जनता अब सडकमा आउन विलम्ब गर्नु हुदैन । होइन भने बहुमतको आडमा संविधानमा जे पनि गर्न पछि पर्ने छैन भन्ने कुरा त संविधान संशोधनकोलागी गठन गरिएको कार्यदलले नै देखाईसकेको छ । एमसीसी जस्ता देशघाती सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्ने दाउमा छ । नेपालको भुभाग भारतलाई सुम्पिसकेकोछ । मन्त्रीहरु नै कमिशन खान तल्लिन छन् । जनतालाई कर नै करले मारीरहेका छन् । त्यसैले देशलाई बचाउने हो अब राजतन्त्र एक मात्र विकल्प रहेको कुरामा कुनै दुइमत नै छैन । तसर्थ समय छँदै राजतन्त्रकोलागी आवाज बुलन्द गर्नूृ बुद्धिमानी हुनेछ ।
होइन अहिले पनि मौन बसेर दलहरुको कार्यलाई विरोध नगर्ने हो भने देश अफगानिस्थान हुन अब धेरै समय लाग्ने छैन । यस तर्फ नेपाली जनताले सोच्नु आवश्यक छ । हुनत राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि समय समयमा देशको बिग्रदो अवस्थाबारे बोली बक्सेको छ र देश र जनता हितकोलागी कहिल्यै पछि नहटने बताईबक्सेको छ । त्यसैले प्रश्न अब यो छ कि नेपालमा राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले पुनस्थापित गर्ने कि विदेशीहरुबाट पुनस्थापित गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । किनकी
राजाबाट अब देश बर्बाद भएको तुलुतुलु हेरर बस्न सकिन्न किनकी राजा यो देशको निर्माता हो । देश र जनताको अभिभावक हो । त्यसैले देश बचाउन राजा पनि आफ्रनै गतिमा तयारी गरिबक्सिरहेको छ भने भारत तथा चीन पनि यी नेपालमा राजसंस्था रहेमा उनीहरु पनि सुरक्षित हुने बुझीसकेको छ । तसर्थ विदेशी शक्ति नेपालमा राजसंस्था पुनस्थापना गर्न तयार छन तर राजा नेपाली जनताबाट नै पुनस्थापित हुन चाहिबक्सन्छ । तसर्थ राजसंस्था पुनस्थापना हुँदैछ अब कुन माध्यमबाट गर्ने निर्णय नेपाली जनताको हातमा । सबैलाई चेतना भया ।
Published on 2020-02-21 Main News
Published on 2020-02-14 Main News
Published on 2020-02-13 Main News
Published on 2020-01-31 Main News
Published on 2020-01-10 Main News